को अन्त्येष्टि सबैभन्दा प्राचीन संस्कार को छ। मा मानिसहरूको चासो को afterlife सबै समय उपस्थित थियो। एक अमर प्राण र अर्को संसारमा यसको स्थानांतरण को अस्तित्व मा विश्वास गर्ने Slavs सहित सबै मानिसहरू गर्न साधारण थियो।
को अर्थोडक्स अन्त्येष्टि परम्परा को जरा
अर्थोडक्स परम्परा र संस्कार को अन्त्येष्टि संस्कार सबैभन्दा स्थिर प्रकारका छन्। तिनीहरूले अर्को संसारमा मरिरहेका को प्राण को संक्रमण लागि तयारी हुन मानिन्छ, त्यसैले शताब्दीयौंदेखि को कार्य नियम अनुसार कडाई छन्। अर्थोडक्स परम्परा को अर्थोडक्स विश्वासीहरूलाई funerals तीन चरणमा विभाजित छन्:
को तयारी को मरिरहेका (आफ्नो मृत्यु अघि आयोजित);
उहाँले अन्त्येष्टि procession;
को अर्थोडक्स मान्छे Kievan रस को बप्तिस्माको परम्परा पालन भन्ने तथ्यलाई, भने दफन कि - मृत्युको वास्तवमा र मृतक एक आदर। दफन संस्कार को वर्ष सयौं स्लाव भाषाहरु संस्कृति को गहिरो मूर्तिपूजक जरा को प्रभाव भइरहेको छ, तर बिस्तारै अर्थोडक्स परम्परा को अन्त्येष्टि आज हामी तिनीहरूलाई थाह छ, त्यसैले भएका छन्।
मृत्यु लागि तयारी
यो लामो मृत्यु लागि तयार परिवार मान्छे मा विश्वासीहरूलाई गरिएको छ: या त किनेको वा हात-सिलना शर्ट र अन्त्येष्टि पोशाक। धेरै बस्तियों मा अगाडी coffins वृद्ध बनाउन समय बनेको छ। मान्छे को आगमन गाडे थिए Orthodoxy किनभने जलाए गर्न प्रयोग मृतक को मूर्तिपूजक रीतिथितिहरू को, तिनीहरूलाई मा छ, र एक पट मा डाल खरानी, वा बस जमीन र खन्नुहोस्। मृतक को परिवार अन्त्येष्टि, को अर्थोडक्स परम्परा कसरी सञ्चालन गर्न चाहन्छौं भने, पुजारी जवाफ सरल छ - यो लाश राख्ने बाकस interred गर्नुपर्छ।
एक व्यक्ति एक लामो समय को लागि बिरामी थियो भने, आफ्ना अभिषिक्त, पुजारी उसलाई absolution गरौं जुन बेलामा। तसर्थ, प्राण purified र संक्रमण लागि तयार छ। मरिरहेका, आफ्नो परिवार विदाई भन्न अन्तिम निर्देशन दिन, ऋण र शिकायत क्षमा, एक पवित्र तरिकामा तिनीहरूलाई आशीर्वाद थियो।
दफन लागि शरीर तयार
अन्त्येष्टि (अर्थोडक्स परम्परा) दफन लागि मृतक शरीर को तयारी आवश्यक छ। यो मृत मानिस विशेष मान्छे धोए लागि, सबै भन्दा अक्सर पुरानो महिला छ। शरीर शुद्ध पार्नुभएर को रूढिवादी विश्वास अनुसार बस रूपमा प्राणको पापको क्षमा महत्त्वपूर्ण छ। ablution समयमा प्रार्थना "Trisagion" वा पढ्न "प्रभु, दया छ।" चर्च अनुसार शुद्ध मन र शरीर संग प्रभु अघि देखा पर्न व्यक्ति आदेश।
आज morgue वा अन्त्येष्टि सेवा प्रदायक मा धोए मरेका। यदि यो सम्भव छैन, यो परम्परागत अनुकूलन मृतक Kin हुनुहुन्छ छैन मानिसहरूले प्रदर्शन।
एक पटक, मृतक धोए यसलाई सफा कपडा संग राखे तालिका मा राख्नु र नयाँ लुगा मा तैयार छ। यदि यो सम्भव छैन, केही कुराहरू कम्तिमा सफा हुन छ।
अन्त्येष्टि लागि तयारी
को लास स्नान पछि लाश राख्ने बाकस मा राख्नु र Crosses संग कढाई एक कफन ढाकिएको। यो तयार छ कि पहिले, पवित्र पानी छिडकाव। मृत राख्नु, को तकिया मुनि उनको टाउको संग सामना अप। दायाँ बायाँ माथि, आफ्नो छाती मा जोडेको - मृतक को आँखा बन्द हुनुपर्छ हात। आवश्यक मरेका pectoral पार, को अन्त्येष्टि साथ दिनु पर्छ जो मा राख्दै छलफल।
तेस्रो दिन मा भयो जो अन्त्येष्टि, गर्न मृतक अप माथि प्रार्थना पढ्न आवश्यक पुरातन समयका अर्थोडक्स परम्परा र संस्कार। यो अन्त गर्न हामी chitalschikov निमन्त्रणा। जबकि मृतक प्रतिमा अन्तर्गत घरमा झूट थियो, र माथि यो मृत नातेदार लागि प्रार्थना पढ्न र मित्र अलविदा भन्न आए।
आज, धोए र एक लाश राख्ने बाकस मा राखिएको देर पछि, तपाईं लेख पढ्न पर्छ "शरीर बाट प्राण अन्त मा सेवा।" तपाईं पुजारी आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि अन्त्येष्टि अनुष्ठान को यो भाग नातेदार कसैलाई मा लाग्न सक्छ।
त्यस अवस्थामा, यदि मृतक सम्भव छैन घरमा ल्याउन छ, त्यसपछि यो Canon प्रतिमा वा जहाँ morgue ढोका नजिकै, उदाहरणका लागि, अन्त्येष्टि सुरु हुनेछ ठाँउ नजिकै सामना पढ्न सकिन्छ।
पनि अगाडि मृतक को अन्त्येष्टि चर्च, यो प्रार्थना आदेश हुनुपर्छ।
देर को अन्त्येष्टि सेवा
को अन्त्येष्टि लागि मृतक संग लाश राख्ने बाकस चर्च गरिएका र वेदी यो दिन छ। येशूको छवि एउटा काँध - मा निधारमा लेट मा "Trisagion" मुद्रित मुकुट, र आफ्नो हात हुनुपर्छ। मृतक को टाउको मा कि नातेदार र साथीहरू जानेबेलामा मा चुम्बन गर्न सक्नुहुन्छ पार राखिएको छ।
हाम्रो समय मा, अन्त्येष्टि मृतक वा आफ्नो मृत्यु पछि तेस्रो दिन मा अन्त्येष्टि घर घरमा ठाउँ लिन सक्छ। यस मामला मा मृतक खुला अनुहार संग एक लाश राख्ने बाकस मा निहित छ, पूर्व विस्तार र त्यो प्रतिमा र मोमबत्ती मा आफ्नो खुट्टा राख्नु। कुनै कुरा जहाँ अन्त्येष्टि आयोजित छ, मृत प्रतिमा, छैन मानिसहरूलाई अनुहार झूठ पर्छ। त्यसैले तिनले माफी र पापको क्षमा को पवित्र छवि आकर्षित देखिन्छ।
को अन्त्येष्टि सेवा गायन "अनन्त मेमोरी" र "जाने", को लाश राख्ने बाकस बन्द र मन्दिर बाहिर लगियो जो पछि समयमा। चर्च को अनुष्ठान समयमा नातेदार आउनुभएका रोशनी मोमबत्ती संग खडा र मृतक लागि प्रार्थना र त्यसपछि अन्त्येष्टि थाल्छन्। अर्थोडक्स परम्परा केहि लाश राख्ने बाकस राख्न अनुमति छैन, तर अनुमति मृतक र आफ्नो निधारमा मा कागज को एक पट्टी को हात मा प्रतिमा चुम्बन गर्ने विदाई गर्न आए। यस paganism एक relic छलफल छ, लाश राख्ने बाकस, भोजन, सजावट वा अन्य कुराहरू निषेधित मा पैसा राख्दै।
परम्परा मृतक को अन्त्येष्टि सेवा पछि लाश राख्ने बाकस पछि अन्त्येष्टि procession निम्न समावेश गर्नुहोस्। यसलाई जान आवश्यक छ, र स्टप गर्न सकिन्छ मात्र चर्च र पहिले नै गिर्जाघरको छेउछाउको चिहान मा। आजकल, को चिहान धेरै किलोमिटर दूरी मा अवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको, को procession चर्च मा अन्त्येष्टि सेवा पछि गर्दा लागि जान्छ, र त्यसपछि mourners यातायात बस्न र दफन को ठाउँमा जानुहोस्।
को चिहान मा लाश राख्ने बाकस एक ढक्कन संग र डोरी वा तौलिया को गम्भीर मा कम को मद्दत ढाकिएको जो पछि मृत एउटा विदाई, आयोजित। नातेदार र अन्त्येष्टि procession को सदस्यहरूले लाश राख्ने बाकस मा पृथ्वीको एक मुट्ठी फेंक, र त्यसपछि प्रस्थान, र काम gravediggers गरेको छ।
यो परिवारको लागि एक कठिन भावनात्मक समय छ, यो लाश राख्ने बाकस खाडलमा कम छ रूपमा तिनीहरूले हेर्नुभयो छैन भनेर मनमोहक छ। तपाईं mound हालिएको गरेपछि, परिवार अलविदा मृतक, बिछाउने फूल र माला भन्छन्, र प्रक्रिया एक स्मारक भोजन जान्छ।
अन्त्येष्टि पछि एक जागा
अर्थोडक्स परम्परा, को अन्त्येष्टि पछि, मृतक संयुक्त भोज को प्राण को अनिवार्य सम्झनामा आवश्यक पर्दछ। यो मृतक को घर वा बुक कोठा मा हुन्छ।
सँगै खाने सँगै मरेका लागि जीवित को सम्झनाहरु ल्याउँछ। शब्द र विचार राम्रो हुन छ, हल्का, मृत्यु पछि - यो जीवनको प्राकृतिक अन्त छ।
उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको अर्थोडक्स अन्त्येष्टि परम्परा मा खाना छ। त्यो एक स्मारक धाउन तयार छ को अन्त्येष्टि दिन? सामान्यतया, केही व्यञ्जन सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। सूची अपेक्षाकृत स्थिर छ, तर मतभेद विभिन्न क्षेत्रहरु को परम्परा dissimilarity कारण हुन सक्छ।
borscht, बन्दागोभी सूप, सूप वा चाउचाउ - पहिलो अक्सर त्यसपछि केही सूप र kutyu सेवा गरे। दोस्रो प्रस्ताव अनाज वा आलु मा। भोजन मासु हुन सक्छ, र सम्झनामा Lent को दिन मा आयोजित गरिएको छ भने neskoromnymi हुन सक्छ र। एउटै माछा वा जेली खुवाउनुभयो गर्न सकिन्छ। समाप्त स्मारक खाने kutey वा प्यानकेकहरू, केही अवस्थामा - प्यानकेकहरू।
को रक्सी सेवा रक्सी वा वोदका, तर यो सधैं गरेको छैन र यस्तो पेय संख्या सानो हुन छ।
नवौं र fortieth दिन को मठ
त्यो समय मा त्यो अग्निपरीक्षाहरू उनको थाले किनभने मृत्यु पछि अर्थोडक्स परम्परा द्वारा मानिन्छ नवौं र fortieth दिन, प्राण लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यो प्राण पश्चात्ताप र पाप को छूट को एक चरण बित्दै भन्ने हो। यो अवधिमा थुप्रै चर्च मा एक स्मारक liturgy आदेश पक्का हुन। अधिक प्रार्थना मृतक लागि, सजिलो प्राण को यो चरण पार गर्न छ पढ्नुहोस्।
स्मारक खाने को अन्त्येष्टि (को अर्थोडक्स परम्परा,9दिन) को लागि अन्त्येष्टि मा जस्तै व्यञ्जन हुन्छन्। तिनीहरू सबै अन्त्येष्टि दिन नै सख्त क्रममा सेवा गरे।
प्राण सधैंभरि यो संसारमा छोडेर देखि Fortieth दिन, एक ल्यान्डमार्क मानिन्छ। अर्डर Liturgy प्रार्थना वा धेरै चर्च मा अनिवार्य पनि एक स्मारक भोजन पकड गर्नुपर्छ।
मरेका लागि दुःखमा लगाएका सर्तहरू आफ्नो उमेर र लिङ्ग मा निर्भर गर्दछ। वृद्ध लागि चालीस दिनको लागि दुःखमा लगाउन। को breadwinner मृत्यु भने - यो वा बुबा उसलाई आमा वर्ष भर skorbeyut। विधवा वा विदुर लागि शोक रंग को एक वर्ष वस्त्र अप लगाउने अधिकार रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
प्रकाश: यो छ र यसको महत्त्व के
सेन्ट Iver आश्रममा (डोनेट्स्क): मृत्यु नजिकै जीवन
कसरी पहिलो पटक स्वीकार गर्न? तनमनले!
Iver को परमेश्वरको आमा को माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation विहारको प्रतिमा को ढोकाहरू रक्षा
प्रतिमा "डरावना": मान। "हराएको खोजी" - चमत्कारी ढंगमा प्रतिमा
येशूको पत्नी को सुसमाचार जाली हुन सक्छ
मास्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था प्राप्त गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र
कसरी परिचित सही? केटाहरू र बालिका लागि मूल प्रश्न
होटल Akteon छुट्टी गाउँ (साइप्रस, पेपहस)
दिमित्री Karpachev - ज्ञात मनोवैज्ञानिक र प्रसारकले
पुरानो जीन्स देखि एक आधुनिक छोटकरीमा कसरी बनाउने - यो दराज अद्यावधिक
भूमि प्रयोग र नगरपालिका विकास: सुविधा र आदेश
ब्राउजर र सेवाहरूको लागि सरल समाधान: कसरी म डेस्कटप "Yandex" मा प्रतीक राख्न गर्छन्
कसरी इन्टरनेट गति गर्न
मानव स्वास्थ्यमा वातावरणको असर
पेन्सन बीमा लागि आवश्यक छ
एक सिंहावलोकन, सुविधा र समीक्षा: देश मा पाइप उड्ने लागि खुम्च्याउने